Sida loo ogaado in gabar xishood badan ay ku jeceshahay - Talooyin ku saabsan shukaansiga | Ragga Stylish
Runtii waan jecel nahay gabadha, waxaan rabnaa inaan ogaano, ogaano wax kasta oo ay jeceshahay iyo sida ay u dhaqantoLaakiin waxaan ognahay inay si hoose u xishooto. Waxaad noqoteen saaxiibo wixii intaa ka hooseeya in dhammaan welwelkaaga ku saabsan jacaylka iyada iyada loo wadaago si isku mid ah iyo qaab. Qoto dheer waxay u muuqataa mid aan go'aan qaadan karin, dabeecaddeeda darteed, shakhsiyadeeda darteed oo aadan ogeyn haddii calaamado kasta ay muujinayaan in la sameynayo sawir nabadgelyo oo sidoo kale isku mid dareemaya.
Badanaa gabdhaha xishoodka leh, marka la eego shakhsiyaddooda, waxay noqdaan kuwo ka maqan dadka kale waana taas sababta ay u siin karaan calaamado yar oo dareemaya nooc ka mid ah soojiidashada wiilka. Tan macnaheedu maahan inaysan iyagu dareemin, laakiin waa iska soo horjeed. Si la mid ah, waxaad u baahan doontaa inaad sahamiso wax kasta oo la xiriira jacaylka, Waxaad ubaahantahay inaad khiyaali ku muujiso oo aad muujiso kalsoonidaada, laakiin haa, xawaarahaaga.
1 Ka warran gabadha xishoodka badan?
2 Calaamadaha gabar xishood badan ayaa ku jeceshahay
Ka warran gabadha xishoodka badan?
Markaan galno safarka jacaylka, fikradaha badan ayaa jahwareeri kara. Ma ahan wax fudud in la kala saaro astaamaha ay dumarka qaar gudbin karaan, tan iyo waxaan dhex galnay halo jacayl. Si la mid ah, haddii ay noo muuqato inay nagu adag tahay inaan ku khasbanno tarjumaa calaamadahaas, Waxay noqon doontaa wax intaa ka sii badan marka haweeneydu xishooto.
Xishoodku waa caqabad kaliya oo gooni isu taagaysa, laakiin dhexdooda waxa kale oo jira adduun iyaga ka walwal qaba. Waxay ku dhex yeelan kartaa haween aqoonyahan ah oo leh awood weyn oo jacayl. Mar alla markii ay aasaaseen xirmooyinka midowga xiriirka wuxuu noqon karaa mid aad u xoogan, tan iyo xulashada ayaa loo sameeyay si aad u gaabis ah inta hawshu socoto.
Gabadha noocan ah waxay kordhisaa niyadeeda markay ogaato deegaankeeda in gabdhaha kale ay go'doomiyaan shakhsiyadeeda. Waxaa jira rag badan oo raadinaya dumar badan oo baxaaya, xaflad badan, xishood la’aan iyo baashaal. Xaqiiqadani waxay ka dhigeysaa inay ka fogaadaan fikradaha noocaas ah, laakiin waa inaanan iloobin in dhexdooda uu ka jiro adduun weyn oo gudaha ah. Hadday sidaas darteed iyagu yihiin haween jidh ahaan qurux badan, waxaan ku yeelan karnaa dhammaan tayada ugu fiican mid.
Calaamadaha gabar xishood badan ayaa ku jeceshahay
Hadaad runti jeceshahay gabar xishood badan, waa inaad iska hubisaa oo aad ogaataa inay runti adiga ku xiisaynayso iyo in kale. Tani aad ayey muhiim u tahay si loo badbaadiyo waqti badan iyo tamar aad jimicsi ku sameyn karto haddii aad noqon karto gabar qaldan:
Muuqaalku waa barta ugu muhiimsan. Xiriir kasta ishu qabashada waxay noqoneysaa waxa ugu muhiimsan. Waa inaad taqaanaa sida loo fasiro milicsiga noocan ah, sida caadiga ah waxaa lagu qabtaa in ka badan inta caadiga ah ee u dhaxeysa labada dhinac. In gabadha xishoodka leh iska horimaadka jalleecyada ayaa noqon doona mid aan kala sooc lahayn, hubaal waxaad ku qaban doontaa indhihiisa dhawr jeer oo isagu kama kicin doono aragtidaada taada. Qaar ka mid ah kormeerkiisa, wuxuu qaban karaa indhihiisa oo aad uga dheer inta caadiga ah waana tan aad ku ogaan doontid taas ardaydiisu way is ballaadhinayaan, waxay yeelan doontaa iftiin gaar ah indhahaaga.
Marwalba way isku dhowdahay. Haddii aad ku jirto jawi xaflad, hubaal waxaad ogaan doontaa joogitaankooda kuugu dhow si joogto ah. Waxay kugu haysataa maskaxdeeda si aad xitaa u eegto booska jirkeeda. Waxaad ogaan doontaa in jirkiisa, gacmihiisa iyo lugahiisa had iyo jeer loo weecinayo dhanka aad joogto, xitaa madaxiisu waxay u janjeerayaan meesha aad joogto, xitaa haddii uu dadka kale la hadlayo.
Jirkeeda ku shukaansiga. Xaqiiqdii maahan wax caadi ah oo uu inta badan sameeyo badalkeedana wuu kula qabtaa. Waxay aaminsan yihiin in bilowgiiba ay wax walba lumeen iyo habdhaqankan waxaa laga yaabaa inay u arkaan inay shukaansigaagu macquul yahay. Wuxuu si joogto ah isugu dayi doonaa inuu dharkiisa hagaajiyo oo uu sameeyo astaamo yaryar sida timaha oo la salaaxo. Taasi waxay noqon doontaa sida uu ku shukaansado.
Dhoolacaddayntu waa mid ka mid ah calaamadaha ugu fiican. Haweeney kasta oo dhexda ku jirta wadahadalka ayaa dhoola cadayn karta sida caadiga ah, iyo in ka badan haddii ay ku dhex jirto koox dad ah. Haddii uu runtii adiga ku xiiseynayo waxay feejignaan dheeri ah gelin doontaa dhaqdhaqaaq kasta oo aad sameyso oo dhoola cadeyn doonaa tilmaam kasta oo aad qaadatid, fiiro gaar ah oo badan. Haddii aad tahay qof jecel inaad kaftanka iyo kaftanka u sheegto, waxaad xitaa ogaan kartaa in qaar ka mid ah faallooyinkaaga, oo aan sidaa u qosol badnayn, si ka duwan oo xad dhaaf ah loo karaameeyay. Tani waxay lamid tahay iyada oo adiga ku danaynaysa.
Wuxuu si joogto ah u bixiyaa caawimaaddiisa wuuna ku taabtaa. Isagu waa mid waxtar leh oo muujiya xiisahiisa ugu fiican isagoo ku siinaya inuu kaa caawiyo haddii aad u baahato nooc ka mid ah raaxada deegaankaaga. Waa hab aad dooneyso inaad waqti badan kula raadsato. Ahaanshaha xishoodka waxay u badan tahay inaysan raadin doonin xiriir jireed, laakiin inay sidaa sameyso waxay u badan tahay tilmaanta ugu fiican. Wuxuu raadsan karaa la xiriirida gacmihiisa ee gacmahaaga, isku duubi kara, ku ciyaari kara xoogaa dharbaaxo ah ama dhirbaaxo. Haddii, dhinaca kale, aad tahay qofka doonaya inuu taabto, u fiirso sida ay uga falceliso haddii aad isku daydo, haddii aad hesho jawaab wanaagsan, waxaa hubaal ah in kiimiko u dhexeyso labadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo ogaado haddii gabar xishood badan ay ku jeceshahay
Noocyada surwaalka ragga
Sida looga gudbo dhibaatooyinka shaqada